Fiverenana amin'ny fampiasam-bola amin'ny media sosialy Martech Zone
Ny fampahalalam-baovao sosialy dia nanana fampanantenana mahatalanjona ho mpanelanelana amin'ny fifandraisana eo amin'ny mpanjifa na ny mpanjifa sy ny orinasa manome ny vokatra na serivisy. Orinasa maro no nitsambikina avy hatrany fa ny ROI kosa dia saro-kenatra satria tsy matetika dia nifarana tamin'ny fidiram-bola na mivantana izany.
Alohan'ny hametrahanao ny programa sosialinao hahombiazanao dia zava-dehibe ny mahatakatra hoe inona ireo hetsika izay mitondra ROI eo amin'ny fiaraha-monina. Ny marketing amin'ny atiny, ny fomba fijery ara-tsosialy, na ny ezaka fanentanana sy fitazonana toy ny serivisy ho an'ny mpanjifa sosialy? Salesforce dia niara-niasa tamin'i Altimeter ho mamoaka fanadihadiana mifantoka amin'ity lohahevitra ity, ny ROI amin'ny fitantanana media sosialy.
Ny valin'ny fikarohana dia mametraka fa misy fiverenana amin'ny fampiasam-bola ho an'ny ezaky ny media sosialy, saingy tamin'ny alàlan'ny fahombiazana sy ny fahamatorana no nananganana azy. Ilaina ny fahaiza-manao satria ny fametrahana paikady media sosialy dia mitaky fampidirana sy fanamoriana ho an'ny fandaharam-potoana, fitantanana, fanaraha-maso ary famaliana ireo hetsika amin'ny haino aman-jery sosialy.
Ny fahamatorana dia takiana mba hahazoana antoka fa misy ny fizotran'ny fitantanana mba hampitomboana ny fifandraisan'ny media sosialy manaraka ary handrefesana tsara ny vokany. Raha ny marina, ny ROI an'ny media sosialy, arakaraka ny refesin'ny orinasa iray isa mpanentana net, avo roa heny amin'ny fahamatorana.
Zahao ny sary navoakan'izy ireo, Ny ROI an'ny fitantanana media sosialy, hahafantarana izay tetika ara-tsosialy mitondra ny ROI sosialy sy ny fampiasa ilainao amin'ny sehatra sosialy hahomby.
Tags: fiverenana amin'ny fampiasam-bolamiverina amin'ny media sosialyfiverenana amin'ny fampiasam-bola amin'ny media sosialy
Jan 26, 2012 ao amin'ny 10: 30 AM
Ny paikady sy tanjona amin'ny media sosialy dia samy hafa ho an'ny orinasa tsirairay. Na dia mety ho hitan'ny orinasa sasany aza fa toerana tsara hanaovana fifaninanana na handefasana fihenam-bidy ny media sosialy, dia mety tsy izany no fomba mety ho an'ny orinasa rehetra. Zava-dehibe ny mijanona ho mahatoky amin'ny maha-marika anao.
Janoary 26, 2012 amin'ny 4:42 PM
Ekeko tanteraka, @nickstamoulis:disqus ! Ary heveriko fa indraindray isika dia mifantoka amin'ny ROI mba hanamarinana ny vola rehetra ary tsy mila izany. Indraindray dia tsara fotsiny ny mamoaka ny anaranao tsy misy fanantenana fa hilatsaka ny dolara!
Jan 29, 2012 ao amin'ny 5: 53 AM
Oay, tena ilaina sy mahaliana ireo angona ireo. Misaotra betsaka!
Ny haino aman-jery sosialy dia iray amin'ireo media marketing malaza indrindra amin'izao fotoana izao.